The Ab Presents Nepal » रबि लामिछानेले नै गर्दा आ*मह*या, आफन्तको आरोप ! रबि लामिछाने आर्यघाट पुग्दा भागाभाग !
रबि लामिछानेले नै गर्दा आ*मह*या, आफन्तको आरोप ! रबि लामिछाने आर्यघाट पुग्दा भागाभाग !
बि लामिछानेले नै गर्दा आ*मह*या, आफन्तको आरोप ! रबि लामिछाने आर्यघाट पुग्दा भागाभाग रबि लामिछानेले नै गर्दा आ*मह*या, आफन्तको आरोप ! रबि लामिछाने आर्यघाट पुग्दा भागाभाग रबि लामिछानेले नै गर्दा आ*मह*या, आफन्तको आरोप ! रबि लामिछाने आर्यघाट पुग्दा भागाभाग रबि लामिछानेले नै गर्दा आ*मह*या, आफन्तको आरोप ! रबि लामिछाने आर्यघाट पुग्दा भागाभाग
सहकर्मी शालिकरामको पार्थिक शरिर जलिरहदा नै..रबि लामिछाने लाईभमा आए..रबि को कारण शालिकराम झुण्डिएको समाचार छाप्ने डलर खेतिहरुलाई जवाफ..हेर्नुहोस्। टि भि जर्नलिस्ट शालिकराम पुडासैनीको सन्दर्भमा
यो पनि..२३ घन्टापछि उठ्यो पत्रकार सालिकरामको श*व..उर्लियो जनसागर हेर्नुहोस् ।
चितवन । मंगलबार साँझ चितवनको कङ्गारु होटलमा मृ*त भेटिएका पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको श*व उठेको छ । मृतकका परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिए पछि साथै प्रहरी प्रशासन, होटल व्यवसायी लगायत सरोकार वाला पक्षले घट्ना को निस्पक्ष छानविन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनको श*व २३ घण्टापछि उठेकाे हाे ।
अब उनको श*व काठमाडौंमा पोस्ट मार्टम गरिने भएको छ । घटना संकास्पद भएको भन्दै उनका परिवारले पुडासैनीको श*व उठाउन मानेका थिएनन् । प्रहरीले सवको मुचुल्का उठाए पनि परिवारको अडानका कारण २३ सम्म श*व घटना स्थलमै रहेको थियो । प्रहरी प्रशासन, होटल व्यवसायी लगायत सरोकारवाला पक्षले घट्नाको निस्पक्ष छानविन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि स*व २३ घन्टापछि राति ८ बजे उठाएको हो।
घटनास्थलमा उनले बोकेका क्यामेरा र व्ययाग नभएको भित्रबाट मुल डोकाको चुकुल लागाईएपनि कोठाको झ्यालबाट मानिस पस्न र निकाल्न मिल्ने अवस्थामा रहेको प्रत्यक्ष दर्शीले बताएका छन् । पुडासैनी केही महिना अघि सम्म न्यूज २४ मा सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमको रिपोर्टरका रुपमा कार्यरत थिए । तर पछिल्लो १ महिना अघिबाट उनी माउण्टेन टेलिभिजनमा मिसन न्युज नामक एक कार्यक्रम चलाउदै आएका थिए । पुडासैनी नुवाकोटका स्थायी बासिन्दा हुन् ।
रबि लामिछानेले नै गर्दा आ*मह*या, आफन्तको आरोप ! रबि लामिछाने आर्यघाट पुग्दा भागाभाग रबि लामिछानेले नै गर्दा आ*मह*या, आफन्तको आरोप ! रबि लामिछाने आर्यघाट पुग्दा भागाभाग रबि लामिछानेले नै गर्दा आ*मह*या, आफन्तको आरोप ! रबि लामिछाने आर्यघाट पुग्दा भागाभाग रबि लामिछानेले नै गर्दा आ*मह*या, आफन्तको आरोप ! रबि लामिछाने आर्यघाट पुग्दा भागाभाग